Bitcoin v0.1 wepụtara | Exonumia
# Bitcoin v0.1 wepụtara
nke Satoshi Nakamoto 2009/01/09open in new window
Ịkpọsa mwepụta mbụ nke Bitcoin, ego eletrọnịkị ọhụrụ usoro nke na-eji netwọk ndị ọgbọ na ndị ọgbọ iji gbochie imefu okpukpu abụọ. A na-ewepụ ya kpamkpam n'enweghị ihe nkesa ma ọ bụ ikike etiti.
Hụ bitcoin.org maka nseta ihuenyo.
Budata njikọ: http://downloads.sourceforge.net/bitcoin/bitcoin-0.1.0.rar
Windows naanị maka ugbu a. Agụnyere koodu C++ mepere emepe.
Mepee faịlụ ndị ahụ n'ime ndekọ aha
Ọ na-ejikọta na ọnụ ụzọ ndị ọzọ na-akpaghị aka
Ọ bụrụ na ị nwere ike idowe ọnụ ọnụ na-anabata njikọ mbata, ị ga na-enyere netwọkụ aka nke ukwuu. Port 8333 dị na gị firewall kwesịrị imeghe iji nweta njikọ mbata.
Ezi software ka bụ alfa na nnwale. Enweghị nkwa ọ bụla Agaghị ebido steeti sistemụ ahụ n'oge ụfọdụ ma ọ bụrụ na ọ ọ dị mkpa, n'agbanyeghị na emela m ihe niile m nwere ike ime iji wuo ụlọ extensibility na nsụgharị.
Ị nwere ike nweta mkpụrụ ego site n'inweta onye zitere gị ụfọdụ, ma ọ bụ gbanye Nhọrọ-> Mepụta mkpụrụ ego iji mee ọnụ ọnụ wee mepụta ngọngọ. Emere m ihe akaebe na-arụ ọrụ siri ike ridiculously mfe ịmalite na, ya mere n'ihi na obere oge na mmalite a-ahụkarị PC ga-enwe ike mepụta mkpụrụ ego n'ime awa ole na ole. Ọ ga-esiwanye ike mgbe asọmpi na-eme ka mmezigharị akpaaka na-ebuli ihe isi ike. Mkpụrụ ego emepụtara ga-echere blocks 120 ka ha tozuo tupu ha enwee ike ịdị nọrọ.
E nwere ụzọ abụọ iji zipu ego, ọ bụrụ na onye nnata nọ na ịntanetị, ị nwere ike tinye adreesị IP ha na ọ ga-ejikọta, nweta ọha ọhụrụ igodo wee zipu azụmahịa na nkọwa. Ọ bụrụ na onye nnata bụ ọ bụghị online, ọ ga-ekwe omume iziga ha Bitcoin adreesị, nke bụ hash igodo ọha ha na-enye gị. Ha ga-anata azụmahịa ahụ oge ọzọ ha jikọọ wee nweta ngọngọ ọ bụ na. Usoro a nwere mwepu na ọ dịghị ikwu ozi ezipụla, na ntakịrị ihe nzuzo nwere ike ịla n'iyi ma ọ bụrụ na ejiri adreesị ahụ ọtụtụ ugboro, mana ọ bụ ihe bara uru ọzọ ma ọ bụrụ na ndị ọrụ abụọ enweghị ike ịnọ n'ịntanetị n'otu oge ma ọ bụ onye nnata enweghị ike ịnweta mbata njikọ.
Ngụkọta nkesa ga-abụ mkpụrụ ego 21,000,000. A ga-ekesa ya na netwọk netwọk mgbe ha na-eme blocks, na ego bee na ọkara kwa afọ 4.
Afọ 4 mbụ: mkpụrụ ego 10,500,000
afọ 4 na-esote: mkpụrụ ego 5,250,000
afọ 4 na-esote: mkpụrụ ego 2,625,000
afọ 4 na-esote: mkpụrụ ego 1,312,500
Mgbe nke ahụ kwụsịrị, usoro ahụ nwere ike ịkwado ụgwọ azụmahịa ma ọ bụrụ mkpa. Ọ dabere na asọmpi ahịa mepere emepe, a ga-enwekwa ya eleghị anya na-adị njikere mgbe nile ịhazi azụmahịa n'efu.
← Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System Re: Bitcoin v0.1 wepụtara →